शिक्षा इकाई प्रमुख उम्काउन ‘फर्जी’ मेडिकल रिपोर्ट | Nagarik News - Nepal Republic Media
शिक्षा इकाई प्रमुख उम्काउन ‘फर्जी’ मेडिकल रिपोर्ट
जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई डोटीका प्रमुख रामदत्त जोशी । तस्बिर: नागरिक
२ चैत्र २०७६ ३ मिनेट पाठ
डोटी- जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाई डोटीका प्रमुख रामदत्त जोशी शुक्रबार कार्यकक्षमै मदिराले ‘मदमत्त’ भेटिए। कार्यालय समय(१२ः३०)मै कार्यकक्षमै लट्ठीएको अवस्थामा भेटिएपछि तत्कालै प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेललाई खबर भयो। पौडेलले ‘प्रहरी पठाएर नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने’ बताएका थिए।
त्यसपछि ढिलोगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीबाट प्रहरी निरीक्षक कर्ण बोहराको नेतृत्वमा प्रहरी टोली जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाईतर्फ गयो। टोलीले प्रमुख जोशीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएन। बरु ‘भित्रबाट ढोका बन्द गरेर बसेको’ जवाफ दियो।
त्यसपछि कार्यालय समय सकिएको घण्टौपछि ५ः४५ मा जिल्ला अस्पताल डोटीमा लगेर उनको मेडिकल जाँच भएको बताईएको छ। उनको मेडिकल जाँच अहेब यशोदा खड्काले गरेकी छन्।
मेडिकल रिपोर्टमा शिक्षा इकाई प्रमुख जोशीले मदिरा सेवन नगरेको ‘विरोधाभाषपूर्ण’ प्रमाणपत्र तयार पारिएको छ। प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जोशीको स्वासको जाँच गरिएको छैन। बोलीचाली र हिँडाई जाँच अनुसार प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
यही ‘फर्जी’ प्रमाणपत्रका आधारमा जोशीलाई उन्मुक्ती दिईएको छ। ‘मेडिकल रिपोर्टले खाएको छैन भन्ने देखाएको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने,‘त्यसैले अहिले कारबाही हुन्न।’
यता मेडिकल रिपोर्टले सबै सत्यता बोल्न नसकेको पनि हुनसक्ने स्वयम् मेडिकल कार्यमा सहभागी स्वास्थ्यकर्मी बताउँछिन्। ‘हामीले थाहा पाउने भनेकै मेशिन(ब्रेथलाईजर)बाट हो। मेशिन छैन। त्यसपछि स्मेल(स्वाँस)बाट हो,’ अहेब खड्काले भनिन्,‘खाएको होला! हामीसंग मेशिन थिएन। दुईजना महिला मात्र थियौ। नजिक गएर स्मेल पनि लिन सकेनौ।’
जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डा. ज्योती पाण्डेले पनि ब्रेथलाईजर मेशिन नभएकाले नै जाँचमा समस्या आएको हुनसक्ने बताईन्। ‘मेशिन नभएपछि सुँघेर, वा बोलीचाली र हिडडुल गराएर हो,’ उनले भनिन्,‘त्योबाट एकीन रिपोर्ट नआउनपनि सक्छ।’
उनलाई उन्मुक्ती दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै परामर्शमा ढिलासुस्ती गराएर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तयार पारिएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ। ‘खाएकै हो। सधै खान्छन्। सिडिओकहाँ पनि पटक–पटक गुनासो आएकै रहेछ,’ स्रोत भन्छ,‘तरपनि बचाउनकै लागि यसो भएको हो।’
प्रकाशित: २ चैत्र २०७६ २०:३० आइतबार